Kooxda Liverpool Oo Xiiso Weyn U Qabta Weeraryahank Reer France Kylian Mbappe Ee Kooxda PSG
HomeHoryaalka IngiriiskaKooxda Liverpool oo xiiso weyn u qabta weeraryahank reer France Kylian Mbappe ee kooxda PSG
November 24, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa lagu soo waramayaa inuu isha ku hayo inuu la wareego weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe iyadoo ay sii socdaan wararka xanta ah ee ku saabsan weeraryahanka.
Weeraryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska, oo loo aqoonsan yahay inuu yahay weeraryahanka ugu da’da yar kubbadda cagta adduunka, kaliya in ka yar 18 bilood ayaa ka harsan inuu qandaraaskiisa haatan kula joogo kooxda heysata Ligue 1.
Kooxda La Liga ka dhisan ayaa la rumeysan yahay inay ka go’an tahay inay gacanta ku dhigto 21 jirkaan, si kastaba ha ahaatee, warbixin dhowaan soo baxday ayaa soo jeedisay in Merseyside Reds ay si aad ah u baadi goobeysay weeraryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska kaasoo isku muujiyay inuu yahay mid ka mid ah adduunka ugu fiican. Ciyaaryahan ka tirsan PSG.
Sida laga soo xigtay Sport, tababaraha Liverpool Jurgen Klopp ayaa doonaya inuu gacant kusoo dhigo ciyaaryahanka ku guuleystay Koobka Adduunka, waxaana uu si adag uga danbeeyaa kooxihiisa la sheegay inay raadinayaan adeegiisa.
Weeraryahankii hore ee AS Monaco, oo lagu soo waramayo in lagu heli karo 1 161m xagaaga soo aadan, ayaa shabaqa soo taabtay 7 jeer wuxuuna caawiye ka ahaa 7 kale 8 kulan oo uu u ciyaaray PSG ololahan.
Dhanka kale, weeraryahanka reer France ayaa dhaliyay 97 gool isla markaana caawiye ka noqday 58 kale 132 kulan oo uu u ciyaaray kooxdiisa haatan tan iyo markii uu kaga soo biiray AS Monaco, markii ugu horeysay ee uu amaah ku soo laabtay 2017.